गूगलले किन हटायाे प्ले स्टाेरबाट १७ किसिमका एप्स ? | News Polar
गूगलले किन हटायाे प्ले स्टाेरबाट १७ किसिमका एप्स ?
एजेन्सी आश्विन १२, २०७७, सोमबार
गूगलले नियमित रुपमा प्ले स्टोरबाट विभिन्न किसिमका शंकास्पद एवं भाइरसयुक्त एप्लिकेसनहरु हटाइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय जोकर मालवेयरबाट संक्रमित १७ वटा एप्स गूगलले प्ले स्टोरबाट हटाएको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो पटक यस्तो मालवेयर संक्रमित एप्सका बारेमा Zscaler ThreatLabZ अनुसन्धाताहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।
यी एप्सको प्रयोग एसएमएस, सम्पर्क (कन्टाक्ट), डिभाइस सूचना र प्रिमियम वायरलेस एप्लिकेसन प्रोटोकल ( WAP) का लागि प्रयोग हुन सक्नेछ ।
यी १७ किसिमका एप्सहरु १ लाख २० हजार पटक डाउनलोड भइसकेको छ । यीमध्ये अधिकांश एप्सहरु स्क्यानरसँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक केही मेसेजिङ एप्स र फोटो सम्पादन (इडिटिङ) छन् । गूगलले यी एप्सहरु हटाइसकेकाले यिनीहरुलाई डाउनलोड गर्न सकिने छैन तर आफ्नो डिभाइसमा यी एप्स रहेका भए अनस्टल गर्न सकिने छ ।
हेर्नुहोस् हटाइएका एप्सहरु
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७, १४:२७:३२